China Baby smock mveliso kunye nabenzi | Senlai
1. Isigqubuthelo somntwana wethu silungele ukumila komzimba wosana. Eli laphu alinamanzi kwaye liyaphefumla. Ayizukuphakama ehlotyeni, kodwa inokuhlala ifudumele ebusika. Isimbozo sinokusongela ingalo yomntwana phambi komzimba. Inokuthintela ngokufanelekileyo ukutya ukuba kungawi emzimbeni.
2. Ilaphu lenziwe ngelaphu le-polyester ifayibha engenamanzi, engenawo manzi. Isuphu yemifuno yelayisi inothuli, inodaka kwaye ityebile. Yonke into imisiwe kukunkcunkca, ukuze abantwana bangatshintshi iimpahla zabo izihlandlo ezininzi ngemini, kwaye kulula kakhulu ukuzicoca.
3. Izimbo zethu zokugcina iimpahla zinefashoni ngokwendlela, eyahlukileyo ngombala kunye neepateni ezahlukeneyo. Zininzi iindlela zokuthambisa zabantwana bethu, ezinokwahlulwa zibe zizimbo ezahlukeneyo ngokweempawu ezahlukeneyo. Umzekelo, ngokobude be-sleeve, inokwahlulwa isitayile semikhono emide, isitayile semikhono emifutshane kwaye akukho sitayile semikhono. Isitayile semikhono emide silungele ubusika, isitayile semikhono emifutshane kwaye akukho sitayile semikhono silungele ihlobo.
4. Ngokokuyilwa kwepokotho yerayisi, inokwahlulahlulwa ibe yipokotho yerayisi esezantsi, ipokotho yerayisi esembindini, akukho pokothwe yerayisi kunye nepokotho yerayisi. Uyilo lwepokotho yerayisi ubukhulu becala lisetyenziselwa ukubamba ukutya okuthe saa xa umntwana esitya.
5. Ngokobude kunye nesimbo se-smock, inokwahlulwa ibe mfutshane, inde, isiketi ende, ifaskoti Ngonxibelelwano lwangasemva, inokwahlulahlulwa ibe yimali yeVelcro, imali yentambo, ukuncitshiswa koonondaba.
Okulandelayo: Ingxowa yokulala yabantwana
Umntwana Wenkwenkwe Utshisiwe
Usana olunemibala oluNcitshisiweyo